नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने तयारी !
कार्तिक २०, २०७५ PS
काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार उपसभापति बन्ने भएका छ।
आज बस्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई उपसभापति प्रताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको हो।गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार्न आफू पक्षिय नेतालाई अनुरोध गरिसकेका देउवाले बैठक अगाडी पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग समेत छलफल गर्ने भएका छन्।
गतवर्ष मधेसी जनअधिकार फोरमलाई कांग्रेससँग एकता गराउनेबेला भएको सहमति अनुसार उनलाई सभापति बनाउन लागिएको हो। गच्छदारलाई उपसभापति बनाउने बारे पार्टीमा समेत छलफल भईसकेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
पार्टी एक गर्दा भएका सहमतिहरु कार्यान्वन नभएको भन्दै गच्छदारलाई रुष्ट भएकाले उपसभापति बनाउन लागिएको हो।
प्रकाशित : मङ्गलबार, कार्तिक २०, २०७५११:४८
आज देशैभर मनाइयो कुकुर तिहार ! सेना र सर्वसाधारणले यसरी गरे कुकुरपूजा ! (फोटोफिचर)
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको छाति र फोक्सोमा समस्या , आज बिहानै अस्पताल भर्ना !
विवाह भएकै दिन बेहुलीले बच्चा जन्माएपछि…
जनताले धान्न सक्ने कर लगाउनुपर्ने ओलीको भनाइ !
जो ५० वर्षपछिका लागि लेख्थे
मेलम्चीको पानी दशैंअघि नै काठमाडौंका घरघरमा पुग्छः खानेपानी मन्त्री बिना मगर
नक्कली साँचो प्रयोग गरी स्कुटर चोर्ने पक्राउ!!